Soo dejiso fiidiyowyada Twitter ➵ Soo dejiso fiidiyowyada, gifs, sawirrada tweet, sawirada muuqaalka, boorarka cinwaanka, thumbnails, subtitles, palettes color, tags from Twitter.
Waxaad isticmaaleysaa nooca duugga ah. Halkan guji si aad u rakibto nooca ugu dambeeyay 1.0.1
Soo dejiso fiidiyowyada Twitter
❝Ka soo dejiso fiidiyowyada twitter-ka & GIF fariimaha qoraalka ah❞
➶ Soo dejiso fiidiyowyada, gifs, sawirrada tweet, sawirada muuqaalka, boorarka cinwaanka, thumbnails, subtitles, palettes color, tags from Twitter.
Soo dejiyaha fiidiyowga ee Twitter waa aalad toos ah oo loogu soo dejiyo fiidiyowyada twitter-ka & GIF kuwaas oo ku duugan tweets. Kaydi wixii fiidiyoo iyo GIF ah Twitter.
Twitter Video Downloader wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kala soo baxdo fiidiyowyada twitter-ka ama aad ka keydiso gifs-ka twitter-ka tooska kombuyutarkaaga, kiniinigaaga ama taleefankaaga Android. ➥ Rakibo hadda
Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada Twitter
Ka xanaaqsan sida loo badbaadiyo fiidiyowyada twitter-ka khadka tooska ah oo looga soo dejiyo GIF twitter-ka? Raac seddexdan talaabo ee fudud iyo soo dejinta farxad leh!
Ka dib markii aad gasho koontadaada twitter, guji hoos u dhigista fallaarta ku taal geeska kore ee midigta sare ee fiidiyowga aad rabto inaad soo dejiso oo aad doorato Nuqul xiriiriyaha si aad uhesho.
Ka dib markii la soo guuriyey url tweet-ka, midig u guji muuskaaga si aad ugu dhajiso url halkan sanduuqa qoraalka kor ku yaal ka dibna riix furaha gala.
Soodejiyaha fiidiyowga ee Twitter-ka ayaa soo saari doona iskuxirayaal fiidiyow oo MP4 ah oo tayo sare leh, waxaadna dooran kartaa inaad kala soo baxdo hadba tayada aad rabto.
Sida loo soo degsado fiidiyowyada Twitter-ka oo leh fidinta Chrome iyo Firefox add-on
🧐 Mararka qaar waxaan la kulannaa fiidiyowyo hal abuur sare leh oo Twitter ah oo aanan iska caabin karin soo dejinta. Keydinta sawirka dhib malahan. Fiidiyowyada, si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan kartaa bixiye fiidiyoow ah oo lagu kalsoon yahay oo twitter ah. Qalabku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo dejiso dhammaan maktabadaha warbaahinta ee akoonnada. Raac casharka soo socda si aad u isticmaasho soo dejiyaha fiidiyowga ugu fiican ee Twitter si aad u badbaadiso fiidiyowga iyo GIF-ka Twitter. Aan tagno!
Fur bogga Twitter-ka.
Muuqaal ku daaro barta Twitter-ka.
Furan soo dejiyaha fiidiyowga Twitter-ka ee Chrome / Firefox ➥ Rakibo hadda
On tab cusub, faylka si toos ah u soo bixi doonaa ka dibna u badbaadin doonaa qalab aad.
Ka dib markaad furto qalabkan, gabal koodh ah ayaa lagu fulin doonaa tabka hadda jira. Koodhadhkan ayaa mas'uul ka ah falanqaynta json code-ka isla markaana ka helaya qoraalka 'tweet' ee hadda ka muuqda shaashada. Tweets-ka aan ka muuqan shaashadda shaashadda waa la iska indhatiray.
Kadib helitaanka muuqaalka fiidiyowga, qalabku wuxuu sii wadaa inuu codsi u diro Twitter si uu u helo xogta json. Badhanka soo dejintu wuxuu markaa ka muuqan doonaa hoosta tweet kasta iyo daaqada qalabka.
Waxyaabaha aad ka soo dejisan karto tweet kasta waxaa ka mid ah fiidiyowyo, gifs, sawir kasta oo ku jira tweet-ka, cinwaanno kala go'i kara. Waad eegi kartaa oo weyneyn kartaa avatar iyo boorar leh tayada ugu sareysa. Si fudud u nuqul waraaqaha iyo astaamaha lagu qoro tweets.
Fiiro gaar ah: Qalabkani wuxuu kaliya taageerayaa soo dejinta faylasha ay martigeliso Twitter. Kordhintani ma siineyso gelitaanka degel kasta, sidaa darteed isticmaaleyaashu ma soo dejisan karaan fiidiyowyo tweets ku duugan bogagga kale.
URLs la taageeray
Maxay Tahay Sababta Loo Adeegsado Soodejiyaha Fiidiyowga ee Twitter-ka?
Haddii fiidiyowga laga saaro Twitter, markaa waad awoodi doontaa inaad daawato.
Dhammaan fiidiyowyada la soo dejiyey waxaa loo wareejin karaa taleefankaaga casriga ah si aad si fudud ula wadaagaan.
Mid kasta oo ka mid ah fiidiyowyada aad soo dejiso waxaa laga daawan karaa khadka tooska ah.
Si aad u daawato fiidiyowga si buuxda haddii uu dherer yahay oo aadan haysan waqti kugu filan.
Waxaad awood u yeelan kartaa inaad sameysato liisaska qad la'aanta markaad safreyso.
☀ Ku soo dejiso fiidiyowga Twitter qoraal.
☀ U beddel fiidiyowga Twitter-ka mp4.
☀ Ka soo dejiso Ultra HD 1440p, Full HD 1080p, HD 720p video ka Twitter.
☀ Soo degso Twitter gif.
☀ Soo dejiyaha fiidiyowga gaarka loo leeyahay ee Twitter.
☀ Soo dejiso baahinta Twitter.
☀ Ka soo degso sawirrada asalka ah Twitter-ka.
☀ Sawir qaadaha sawirka Twitter.
☀ Soodeji sawirka sawirka Twitter.
☀ Soo dejiso sawirka madaxa ee Twitter.
☀ Soo dejiso thumbnails Twitter.
☀ Si otomatig ah u soo dejiso oo u kaydso faylka sida ku cad cinwaanka fiidiyowga iyo tayada la xushay.
☀ Loogu talagalay Android.
☀ Jumlada soo dejiso sawirrada Twitter.
☀ Soo dejiso fiidiyowga tooska ah ee Twitter.
☀ Soo dejiyaha codka ee Twitter.
☀ U beddel fiidiyowga Twitter-ka mp3.
☀ Ka soo dejiso fiidiyow farriinta tooska ah ee Twitter.
☀ Fiidiyowga Twitter-ka si loogu beddelo gif.
☀ Ku soo dejiso tweets ishtag.
Shabakadda Bulshada ee Twitter waa mid ka mid ah mareegaha ugu caansan adduunka. Goobta waxaa loogu talagalay isweydaarsiga farriimaha dadweynaha iyadoo la adeegsanayo shabakadda internetka, aaladda fariimaha degdegga ah ama barnaamijyada macaamiisha dhinac saddexaad ee isticmaalayaasha Internet da 'kasta. Waxyaabaha ay isticmaaleyaashu ku daabacaan fiidiyowga Twitter-ka ayaa ka mid ah kuwa ugu caansan.
Soodejiyaha fiidiyowga ee Twitter waa barnaamij internet oo toos ah oo loogu soo dejisto fiidiyowyada twitter-ka iyo GIF-yada si toos ah kombiyuutarkaaga ama taleefanka gacanta.
Twitter gif soo degsade
Ka soo dejiso gifs-ka Twitter. Kaydi sidii fiidiyow.
Toos-bixiyeyaasha subtitles ee Twitter
Ka soo saar oo ka soo dejiso cinwaanada Twitter-ka.
Twitter-ka illaa mp4
Qalabku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo dejiso fiidiyowyada Twitter saddex qaraar, SD, HD, iyo UHD (haddii ikhtiyaarka la heli karo).
Soo Degso Fiidiyowyada Khaaska ah ee Twitter
Waxaad ka soo dejisan kartaa fiidiyow ama sawir kasta twitter-ka oo aad daawan karto, oo ay ku jiraan waxyaabaha gaarka loo leeyahay.
Lacag la'aan iyo Ammaan Ku Isticmaal
Dhammaan fiidiyowyada waxaa si toos ah looga soo saaraa server-yada Twitter-ka ee CDN, taasoo ka dhigaysa qalabkan mid gebi ahaanba badbaado leh.
Twitter Video Downloader wuxuu sifiican ugu shaqeeyaa Google Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge iyo daalacashada shabakadaha.
Halkan Ka Raadi Su'aalahaaga iyo Jawaabahaaga - Sideed u keydin kartaa fiidiyowga Twitter-ka?
+ Waa maxay Soodejinta Fiidiyowga ee Twitter?
Soodejiyaha fiidiyowga ee Twitter-ka ayaa ah adeegsi bilaash ah oo awood u leh inuu kaa caawiyo inaad si bilaash ah uga soo dejiso wixii fiidiyowyo ah ee Twitter-ka ah ee loogu talagalay dib u soo celinta qadka.
+ Xagee fiidiyowyadu ku keydsan yihiin ka dib markii la soo dejiyo?
Badanaa dhammaan fiidiyowyada ayaa lagu keydiyaa hoosta Downloads galka. Waxa kale oo aad ku cadaadin kartaa CTRL + J daalacashadaada si aad u daawato taariikhdaada soo dejinta.
+ Sidee loo badbaadiyaa GIF-ka twitter-ka ee iPhone-ka?
Si aad uga keydiso gif ka twitter-ka on iPhone fadlan raac talaabooyinkan. U tag arjiga twitter-ka iphone-kaaga oo ka hel GIF sida aad rabto oo u keydi, si naxariis leh u Taabo oo hayso GIF-ga aad rabto inaad keydiso, dhagsii keydka maktabadda, ku raaxeyso feylkaaga GIF waa la keydiyey.
+ Miyuu soo dajiyaha Twitterku kaydiyaa fiidiyowyada la soo dejiyey ama hayaa nuqul fiidiyow ah?
Ma keydineyno fiidiyowyo. Annagu ma hayno nuqulada fiidiyowyada la soo dejiyey. Dhammaan fiidiyowyada waxaa lagu martigeliyaa server-yada Twitter-ka. Sidoo kale, kuma hayno raadinta taariikhda soo dejinta ee adeegsadayaashayada.
+ Sideen uga soo dejisan karaa fiidiyowyada gaarka loo leeyahay Twitter-ka?
Haddii aad raadineyso inaad kala soo baxdo fiidiyow gaar ah Twitter-ka, markaa wixii aad sameyn lahayd oo dhan waa inaad ogaato URL-ka Tweet-ka. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo soo dejiyo fiidiyowyada Twitter-ka ee koonto gaar loo leeyahay. Waxaa ka mid ah, hal dariiqo oo ah in la ogaado URL-ka koontada gaarka loo leeyahay ee Twitter adoo abuuraya xisaab Twitter ah oo aad raacdo qofka aad u baahan tahay inaad ogaato URL-ka tweets-ka ay leeyihiin. Ka dib markaad qofka ka hesho aqbalaad iyo haddii qofku xaqiijiyo codsigaaga saaxiibtinimo, waxaad awoodi doontaa inaad aragto dhammaan qoraalladooda gaarka ah. Si aad u soo dejiso fiidiyowyada waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto fidinta Chrome ama Firefox. ➥ Rakibo hadda
+ Waa maxay qaabka loo soo dejiyey fiidiyowga Twitter?
Iyada oo ku xidhan tayada la heli karo ee fiidiyowga Twitter-ka, soo-dejiyaha fiidiyowga ee Twitter-ka ayaa soosaaray 1440p, 1080p, HD tayada iyo iskuxirka fiidiyowga ee tayada leh ee SD. Waad dooran kartaa inaad soo dejiso hadba kii aad rabto. Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood, tayada fiidiyowgu way liidataa oo fiidiyowga kaliya ee la heli karaa waa tayada SD.
+ Sidee loo soo degsadaa fiidiyowyada Twitter-ka taleefankayga Android?
Soodejiyaha fiidiyowga ee Twitter-ka ayaa horeyba looga heli karaa Firefox taleefannada Android. ➥ Rakibo hadda
+ Immisa fiidiyoow ayaan ka soo dejisan karaa Twitter?
Soo dejiyaha fiidiyowga ee Twitter ma laha wax xaddidan, saacaddii, maalin ama kuwa kale. Waxaad ka soo dejisan kartaa Twitter inta fiidiyow iyo sawirro ah inta aad rabto.
+ Ma soo dejisan karaa fiidiyowyo haddii aanan ahayn isticmaale ka diiwaangashan Twitter?
Maya. Waxaad u baahan tahay diiwaangelinta twitter-ka si aad u awoodo inaad gasho oo aad u daawato fiidyowyada.
Waxaa jiri kara liis sababo macquul ah oo ka dambeeya arrintan:
Xiriiriyaha la guuriyey wuxuu noqon karaa mid khaldan ama xiriirin jaban.
Xiriirinta la guuriyey waxaa lahaan kara koontada la ilaaliyo.
Xiriirinta la soo guuriyey waxaa ku jiri kara sawir wali ah oo fiidiyow ah.
Haddii aad mobilka ku jirto, taabo oo fiidiyowga hayso illaa xulashooyinka soo dejintu ay soo baxaan. On desktop-ka, midig-u-riix fiidiyowga oo dooro Badbaadi Link sida xulasho ahaan.
Ku soo dejiso Fiidiyowyada Twitter-ka Khadka Tooska ah HD
Twitter Video Downloader wuxuu kaa caawinayaa inaad u abuurto xiriiro toos ah fiidiyowyada aad ugu jeceshahay twitter-ka oo aad u keydiso daawashada iyo wadaagga qad la'aanta.
Soodejiyaha fiidiyowga ee Twitter waa aalad aad u fiican oo aad ku isticmaali karto khadka tooska ah si aad ugala soo baxdo fiidiyowyada iyo GIF-yada Twitter-ka kombuyuutarkayga.
Twitter Video Downloader ayaa gabi ahaanba amaan ah oo si toos ah fiidiyowyada uga soo dejisa server-yada Twitter-ka CDN.
Qalabkani wuxuu u shaqeeyaa dhammaan aaladaha, oo ay ku jiraan kombiyuutarada miisaska, taleefannada gacanta, iyo kiniiniyada.
Qalabkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kala soo baxdo fiidiyowyada (sida MP4s) iyo GIFs-ka Twitter-ka.
Soo dejiso Fiidiyowyada Twitter-ka waa aalad leh interface-ku-habboon saaxiibtinimo.
Hab dhakhso leh oo lagu kalsoonaan karo oo lagu soo dejisto clips.
Tani waa qalab aad u dhakhso badan oo caato ah oo kuu oggolaanaya inaad ku keydiso fiidiyowyada Twitter-ka toosh.
Kordhin cabsi leh oo loogu talagalay soo dejinta fiidiyowga twitter-ka ee baahinta.
Tani waa bedel weyn oo loogu talagalay barnaamijka tweet2gif.
Twitter Video Downloader Bot - Qalabka ugu wanaagsan ee bilaashka ah ee tooska ah ee laga soo dejisto oo looga keydiyo fiidiyowyada iyo GIF-yada Twitter-ka 2021